နေရာပြောင်း ကစားခွင့်ပေးရန် မော်ရင်ဟိုထံ ပေါ့ဘာ တောင်းဆို - Yangon Media Group
နေရာပြောင်း ကစားခွင့်ပေးရန် မော်ရင်ဟိုထံ ပေါ့ဘာ တောင်းဆို
မန်ယူကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာသည် နည်းပြမော်ရင်ဟို၏လက်ရှိ ကစားကွက်တွင် ခြေစွမ်းမပြနိုင်ဖြစ်ခဲ့ ပြီးနောက် ၎င်းကိုနေရာပြောင်းကစား ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းများကဖော်ပြခဲ့သည်။ ပေါ့ဘာသည် လက်ရှိတွင် မော်ရင်ဟို၏ ၄-၂-၃-၁ ကစားကွက်တွင် မာတစ်နှင့်အတူ ကွင်းလယ်တွင် အထိုင်ချကစားနေရသည်ဖြစ်ရာ လတ်တလောပွဲများတွင် ခြေစွမ်းမပြ နိုင်ဖြစ်နေသဖြင့် နေရာပြောင်းကစား ခွင့်ရရန် မော်ရင်ကိုထံတောင်းဆိုမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ပေါ့ဘာသည် စပါးနှင့် နယူးကာ ဆယ်အသင်းများကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့သောပွဲ များအပါအဝင် နောက်ဆုံးသုံးပွဲတွင် လူစားလဲခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက် ကွင်းလယ်ကစားသမားသုံးဦးရှိသော ကစားကွက်တွင် ဘယ်တောင်ပံ၌ပါဝင် ကစားခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ပြင်သစ်သတင်းစာ L’Equipe ကဖော် ပြခဲ့သည်။ ပေါ့ဘာအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း လူကာကူကို အထောင်တိုက်စစ်မှူး၊ လင်ဂတ်ကို နောက်ချန်တိုက်စစ်မှူး၊ ဘယ်ညာ တောင်ပံများတွင် ဆန်းချက်ဇ်နှင့် မာရှယ် (သို့မဟုတ်) ရက်ဖို့ဒ်တို့ကို အသုံးပြုနေသော လက်ရှိကစားကွက် အရ တိုက်စစ်ကစားသမားများအနက်မှ မည်သူ့ကို အရန်ခုံပို့ရမည်ဆိုခြင်းမှာ မော်ရင်ဟိုအတွက် ခေါင်းခဲစရာ ဖြစ်နေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် မန်ယူကစားသမားဟောင်း ပေါလ်အင့်စ်က ပေါ့ဘာမှာ တိုက်စစ်အားသန်သော ကစားသမားဖြစ်ခြင်းကြောင့် လက်ရှိ နေရာမှာ ၎င်းအတွက် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေခြင်းကို နားလည်ပေးနိုင် ကြောင်း၊ မန်ယူတွင်မပျော်ရွှင်ပါက နွေရာသီတွင် အသင်းမှပေါ့ဘာထွက်ခွာသွားနိုင်ကြောင်း သတိပေးပြော ကြားခဲ့သည်။ ပေါလ်အင့်စ်က ”ပေါ့ဘာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေသာ မှန်ခဲ့မယ်ဆို ရင် သူ့အနေနဲ့ မန်ယူကိုပြန်လာကစားရခြင်းအတွက် စိတ်ပျက်နောင် တရနေမယ်ဆိုလည်း အံ့အားသင့်စရာမရှိပါဘူး။ မော်ရင်ဟိုကစားခိုင်းတဲ့နေရာအတွက် သူစိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုရင်လည်း နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ တိုက်စစ်အားသန်သူဖြစ်ပြီး ကွင်းလယ်မှာ အထိုင်ကစားတတ်တဲ့ ကစားသမားမျိုးမဟုတ်လို့ လက်ရှိနေရာမှာ သူ့ကိုမကစားစေသင့်ပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်မှာ ဒီနေရာမှာ ကစားရခြင်းက သူ့အတွက် အံဝင်ခွင့်ကျ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ခြေစွမ်းကသက်သေ ပြနေတာကြောင့် အသင်းမှာသာ မပျော်ရွှင်တော့ဘူးဆိုရင် နွေရာသီမှာ မန်ယူကနေ ပေါ့ဘာထွက်သွားနိုင်ပါတယ်”ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပုံမှန်ခြေစွမ်း ပြန်ရမည်ကို မစိုးရိမ်ခဲ့ကြောင်း မာနေး ဖွင့်ဟ
သက်တမ်းရင့် သစ်ပင်ကြီး၏ အကိုင်းကြီး တစ်ကိုင်း ကျိုးကျမှုကြောင့် နေအိမ်သုံးလုံး ပျက်စီး
ယခုနှစ်အတွင်း အိမ်ရာချေးငွေ ၃၆ ဘီလီယံခန့် ထုတ်ချေးပေးသွားရန်ရှိ
ကသာခရိုင် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း တရားမဝင် သစ်တန်ချိန် ၃ဝဝ ခန့် ဖမ်းမိ
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတစ်ဦးကို လုယက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူများအနက် အဓိကကျူးလွန်သူကို မသေမချင??
မူလတန်း ကျောင်းသားများကို နေ့စဉ် အချိန်ဇယား ရေးဆွဲ သင်ကြားပေးရန် ညွှန်ကြားထား
မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်၊ မတ္တရာသူဌေးကျောင်း ရွှေကျင်နိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌ တွဲဖက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆရာ??